When My Love Blooms ( 2020 ) - Myanmar Asian TV
Stay home ရငျး ပငျြးနကွေမဲ့ drama ခဈြသူတို့အတှကျ melodrama အသဈလေးတဈကားထပျလာပါပွီနျော …
ဒီ drama လေးကို TvN ရုပျသံလိုငျးက ထုတျလှငျ့တာဖွဈပွီး အပတျစဉျ စနေ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့ ည ၉ နာရီ
(မွနျမာအခြိနျ ၆ခှဲ) မှာ ပွသမှာဖွဈပါတယျ …
မွနျမာစာတနျးထိုးကတော့ – တနင်ျဂနှနေနေဲ့တနင်ျလာနတှေ့မှော MMATV CHANNEL မှာ ရှုစား‌အားပေးနိုငျပါတယျနျော…..
အသကျ ၂၀အရှယျ တက်ကသိုလျတကျရငျး ဖူးပှငျ့ခဲ့ရတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပနျးကလေးဟာ ကံကွမ်မာအခြိုးအကှတှေ့ကွေောငျ့ ဆကျလကျ ပှငျ့လနျးနခှေငျ့မရတော့ဘဲ
နောငျအနှဈနှဈဆယျကွာပွီး အသကျလေးဆယျအရှယျရောကျမှ ခဈြပနျးပှငျ့ပိုငျရှငျလေးနှဈဦး ပွနျဆုံကွတဲ့အခါမှာတော့ ဘယျလို လှမျးမောစရာ ၊ ကွညျနူးစရာ ပြျောရှငျစရာ ၊ဝမျးနညျးစရာတှဖွေဈမလဲဆိုတာကိုတော့ အဓိက ဇာတျဆောငျ ၄ယောကျက စညျးခကျြညီညီ အပေးယူမြှမြှ ပါဝငျသရုပျဖျောထားကွတာမို့ မလှတျတမျး ကွညျ့သငျ့တဲ့ drama လေး တဈကားပါနျော ….
အသကျ ၄၀ အရှယျ ခြောမောခနျ့ငွား ရညျရှယျခကျြကွီးမားပွီး အောငျမွငျတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျကွီး
ဟနျ‌ဂဟြှေနျး အဖွဈ –
Yoon Ji Tae (Mad dog ကားထဲက ဦးဦး)
၄၀အရှယျ ဇာတျရုပျနဲ့ သှငျမတူကှဲပွားတဲ့စရိုကျနဲ့တှမွေ့ငျရမဲ့ အသကျ၂၀အရှယျ ဂဟြှေနျးအငယျစား
အနတေညျတညျ ရုပျခြောခြော ဥပဒကြေောငျးသားလေးအဖွဈ –
နာမညျကြျော kpop group GOT7 အဖှဲ့ရဲ့ Park Jinyoung
သကျတမျးနဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုထားတဲ့ အလုပျကိုငျလုပျနရေပွီး
ဘဝကို ခကျခကျခဲခဲ ရုနျးကနျနရေတဲ့ အသကျ၄၀အရှယျ ကလေးတဈယောကျအမေ
ယှနျးဂြီဆု အဖွဈ –
ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျ ပုံဖျောနိုငျစှမျးရှိတဲ့
ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော Lee Bo Young unnie
သူမရဲ့ အသကျ ၂၀ အရှယျမှာတော့ ဂဟြှေနျး ကို အရူးအမူးစှဲလနျးပွီး ဂဟြှေနျး နောကျတကောကျကောကျလိုကျနတေဲ့ ဂီတအထူးပွုကြောငျးသူအ‌ခြောအလှလေးအဖွဈ –
မငျးသမီ‌ခြောလေး Jeon So Nee တို့က အသီးသီး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွပါတယျ ….
အိမျမှာခညျြးနရေလို့ ငွီးငှမေ့သှားရလအေောငျ ဘဝရဲ့အပြျောရှငျရဆုံး အလှပဆုံးသော အခိုကျတနျ့တှဆေီ
ဒီ drama လေးကွညျ့ရငျးနဲ့ အလညျတဈခေါကျ သှားကွညျ့ကွရအောငျနျော ….
Stay home ရင်း ပျင်းနေကြမဲ့ drama ချစ်သူတို့အတွက် melodrama အသစ်လေးတစ်ကားထပ်လာပါပြီနော် …
ဒီ drama လေးကို TvN ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၉ နာရီ
(မြန်မာအချိန် ၆ခွဲ) မှာ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ် …
မြန်မာစာတန်းထိုးကတော့ – တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာ MMATV CHANNEL မှာ ရှုစား‌အားပေးနိုင်ပါတယ်နော်…..
အသက် ၂၀အရွယ် တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ဖူးပွင့်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပန်းကလေးဟာ ကံကြမ္မာအချိုးအကွေ့တွေကြောင့် ဆက်လက် ပွင့်လန်းနေခွင့်မရတော့ဘဲ
နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာပြီး အသက်လေးဆယ်အရွယ်ရောက်မှ ချစ်ပန်းပွင့်ပိုင်ရှင်လေးနှစ်ဦး ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လို လွမ်းမောစရာ ၊ ကြည်နူးစရာ ပျော်ရွှင်စရာ ၊ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အဓိက ဇာတ်ဆောင် ၄ယောက်က စည်းချက်ညီညီ အပေးယူမျှမျှ ပါဝင်သရုပ်ဖော်ထားကြတာမို့ မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ drama လေး တစ်ကားပါနော် ….
အသက် ၄၀ အရွယ် ချောမောခန့်ငြား ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး
ဟန်‌ဂျေဟွန်း အဖြစ် –
၄၀အရွယ် ဇာတ်ရုပ်နဲ့ သွင်မတူကွဲပြားတဲ့စရိုက်နဲ့တွေ့မြင်ရမဲ့ အသက်၂၀အရွယ် ဂျေဟွန်းအငယ်စား
အနေတည်တည် ရုပ်ချောချော ဥပဒေကျောင်းသားလေးအဖြစ် –
နာမည်ကျော် kpop group GOT7 အဖွဲ့ရဲ့ Park Jinyoung
သက်တမ်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ အလုပ်ကိုင်လုပ်နေရပြီး
ဘဝကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေရတဲ့ အသက်၄၀အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်အမေ
ယွန်းဂျီဆု အဖြစ် –
ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် ပုံဖော်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော Lee Bo Young unnie
သူမရဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာတော့ ဂျေဟွန်း ကို အရူးအမူးစွဲလန်းပြီး ဂျေဟွန်း နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ ဂီတအထူးပြုကျောင်းသူအ‌ချောအလှလေးအဖြစ် –
မင်းသမီ‌ချောလေး Jeon So Nee တို့က အသီးသီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ် ….
အိမ်မှာချည်းနေရလို့ ငြီးငွေ့မသွားရလေအောင် ဘဝရဲ့အပျော်ရွှင်ရဆုံး အလှပဆုံးသော အခိုက်တန့်တွေဆီ
ဒီ drama လေးကြည့်ရင်းနဲ့ အလည်တစ်ခေါက် သွားကြည့်ကြရအောင်နော် ….
Translators : May Zun Aung & May Sit Min & HMN
File Size : 400 MB – 500 MB
Episode 01Episode 02Episode 03Episode 04Episode 05Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 14Episode 15
Episode 07Episode 08Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 14Episode 15Episode 16 END
Starring: Jeon So-nee, Kim Yeong-Hoon, Lee Bo-young, Lee Tae-sung, Park Jin-young, Park Si-yeon,